वुहान लेखक जसको भाइरस डायरीले चीनलाई रिस उठायो - यथार्थ खबर
वुहान लेखक जसको भाइरस डायरीले चीनलाई रिस उठायो
Rojjan Raj Pandey २८ मंसिर २०७७, आइतवार
कोरोनाभाइरस प्रकोपको शुरुको दिनहरूमा वुहानमा उनको जीवनको अभिलेख राख्ने एक पुरस्कार विजेता चिनियाँ लेखकले लेखेको डायरीलाई अब अंग्रेजीमा अनुवाद गरिएको छ।
फंग फंग ले सर्वप्रथम जनवरीमा शहरमा उनको अनुभवको अनलाइन खाताहरू प्रकाशन गर्न सुरू गरेकी थिइन, जबकि यो अझै एक स्थानीय संकट मानिन्छ। 65 वर्ष पुरानो डायरी प्रविष्टि व्यापक रूपमा पढ्न सकिन्छ, चीन मा लाखौं प्रदान भाइरस पहिलो देखा जहाँ शहर मा एक दुर्लभ झलक संग।
यस वर्षको सुरूमा, वुहान पूर्ण लकडा राज्यमा प्रवेश गर्ने विश्वमा पहिलो स्थान बने जुन त्यतिबेला सुनेका थिएनन्, तर अब व्यापक भएका छन्। यो शहर केवल चीन, तर विश्वको बाँकी भागबाट अनिवार्य रूपमा काटिएको थियो।
लकडाउन जारी भएपछि फंग फंग लोकप्रियता बढ्यो। त्यसपछि प्रकाशकहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूको प्रविष्टिहरू गर्ने र उनीहरूलाई धेरै भाषाहरूमा प्रकाशित गर्ने थियो।
तर फंग फंग बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उनको चीनमा हेरिने तरिकामा बदलावको साथ आएको छ - धेरै जसो उनको रिपोर्टिंगबाट क्रोधित भएका थिए, उनको देशद्रोही ब्रान्ड पनि गरे।
उनको डायरी के थियो?
जनवरीको आखिरमा, चीनले वुहानमा लकडाउन लगाएपछि, फंग फंग - जसको वास्तविक नाम फंग फंग हो - चिनियाँ सोशल मिडिया साइट वेइबोमा शहरमा घटनाहरूको कागजात लेख्न थाले। एउटा शहरमा एक्लै बस्नु शान्त रह्यो उसको मृत्यु हुनु भन्दा केही घण्टा पहिले उनी अस्पतालको ओछ्यानमा पुगे
के चीनले वुहानलाई मात्र १० दिनमा परीक्षण गर्न सक्दछ?
उनको डायरी प्रविष्टिहरूमा, उनले दैनिक जीवनका चुनौतीहरूदेखि लिएर जबरजस्ती अलगावको शारीरिक प्रभाव सम्म सबै कुरा लेखीन्।
प्रकाशक हार्परकोलिन्स भन्छिन् उनले "आफ्ना लाखौं सँगी नागरिकहरूको डर, निराशा, क्रोध, र आशालाई आवाज दिइन्"।
यसमा उनले उल्लेख गरेकी उनले "सामाजिक अन्याय, शक्तिको दुरुपयोग, र अन्य समस्याहरूको बिरूद्ध पनि बोल्छन् जसले महामारीको प्रतिक्रियालाई बाधा पुर्‍याउँछ र यसको कारण अनलाइन विवादमा आफै फसेकी छ"।
आइतवारको टाइम्सले उनलाई प्रकाशित एक स्तम्भमा उनी एउटा घटनाको विवरण दिन्छिन जहाँ उनी आफ्नी छोरीलाई एयरपोर्टबाट लिन गएकी थिइन।